Kuwani waa qiimaha iPhone Xs iyo XS MAX leh Orange | Androidsis
Eder Ferreño | | Mobiles, Hawl wadeenada taleefanka
IPhone-ka cusub ee Apple dhawaan soo bandhigtay ayaa ah halyeeyada ugu waaweyn ee usbuuca. Saddex nooc oo cusub oo shirkadda Cupertino ay ku dooneyso inay ku cusbooneysiiso taleefannada kala duwan. Naqshadaynta iyo qeexitaannada taleefannada ayaa si aad ah looga hadlay oo looga hadlay, inkasta oo ay tahay qiimaha sedexdan taleefan cusub ee soo saaray doodda ugu badan.
Apple ayaa cusbooneysiisay iPhone-keeda gebi ahaanba leh seddexdan moodal, Xs iyo Xs Max, marka lagu daro XR (oo loo yaqaan 'iPhone jaban ee isticmaala badan). Markii lagu bilaabay Spain, taleefannadan ayaa hadda la yimid Orange.
Isticmaalayaasha xiiseynaya, Liinta waxay soo bandhigtaa moodooyinkan labadaba bilaash iyo khidmad la xiriirta. Marka way kuu sahlanaan doontaa inaad hesho isku-darka ugu habboon waxa aad raadineyso. Waxay kuxirantahay habka aad raadinaysid, qiimaha ayaa magdhow kaa siin kara wax badan.
Qiimo bilaash ah (VAT ayaa lagu daray) Qiimaha iibinta rakibida oo leh qiime (VAT oo lagu daray)
terminal libre Bixinta bilowga ah Khidmad / bishii
TIRADA LA SOCO S4 40MM 529 € 18,50 €
TIRADA LA SOCO S4 44MM 559 € 19,75 €
TIRADA KA DAAWO NIKE S4 44MM 559 € 19,75 €
Qiimayaasha jadwalka kujira waa kuwa Jacaylka Qoyska Jaceyl, Jacaylka Qoyska Aan Xaddidnayn ama Heerarka Jacaylka Aan Xaddidnayn In kasta oo ay suurtagal tahay in la helo iPhones-kan cusub iyadoo la isticmaalayo sicirka kale ee Orange-ka ah. Bixinta bilowga ahi way ka duwan tahay hadba sicirka, laakiin waad ku dari kartaa dhammaan sicirka wadaha.
Sida aad arki karto, IPhone-yada cusub uma muuqdaan inay si gaar ah u jaban yihiin. Kuwa ugu raqiisan waxay leeyihiin qiimo bilaash ah 1.159 euro, wax ay adeegsadayaal badani u arkaan xad-dhaaf. Sideed u aragtaa qiimaha taleefannada cusub ee Apple? Haddii aan isbarbar dhig ku sameyno laba calan oo Android ah sida Galaxy Note 9 ama P20 Pro, qiimayaashu way ka sii sarreeyaan.
Samsung Galaxy Note 9 waa nooca ugu wanaagsan ee ilaa iyo haatan laga leeyahay Korea, waxaa lagu iibiyay 1088 euro dalka Spain. Halka Huawei P20 Pro hadda loo heli karo 735 euro oo ah nooca 128 GB. Waxay si gaar ah qiimo ahaan uga hooseeyaan moodooyinka udhaqaaqa isla qeybta. Sideed u aragtaa qiimayaashan iPhone-ka ah?
Maanta laga bilaabo waxaa suurtagal ah in lagu keydiyo moodooyinkan Orange, illaa iyo inta la bilaabayo Sebtember 21.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Hawl wadeenada taleefanka » Kuwani waa qiimaha iPhone-ka cusub ee leh Orange
Sida loo helo daah-furka ogeysiiska Android P